kechioma Tree | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE! kechioma Tree | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE!
kechioma Tree bụ a mobile free spins bonus game dabeere na isiokwu nke a ọlaedo osisi a Chinese fairytale. E nwere ise-esi anwụde na iri atọ nnukwu paylines dị iche iche na-emeri ihe n'ịgwa. Ndabere nke egwuregwu bụ a mara mma pink isiokwu na a serene ọdọ, kpokọtara ugwu na a ọgaranya siri ike gold osisi. The Osisi na-eto bụghị naanị mara mma epupụta na okooko osisi ma ọlaedo mkpụrụ ego dị ka nke ọma. The spa genre music ke ndabere bụ nnọọ na-agwọ ọrịa uche. E nwere ọtụtụ bonus atụmatụ na-eme na-emeri nnọọ mfe na egwuregwu a. Ịkụ nzọ amalite na dị ka ala dị 30p ma na-aga ruo a max nke £ 90. Nke a bụ a ala ịgba egwuregwu na bụ ezigbo maka kasị egwuregwu.
Banyere Mmepụta nke kechioma Tree
ndị a dị ịtụnanya free spins na-ihe ị na-emeri saịtị game e mepụtara site Scientific Games. Ha iri afọ anọ nke ọgaranya ahụmahụ na ịgba chaa chaa ụlọ ọrụ bụ a doro anya echiche na àgwà nke ha egwuregwu. Na ọtụtụ n'ime ha egwuregwu na-playable na oge a na mobile ngwaọrụ.
Nke a bụ nnọọ anya na-adọrọ adọrọ game na nza nke yi na akara na oyi na-aga aga na mmetụta na-na-emeri. The isi akara na a Feng Shui frog, a mbe ka a kere eke, a azụ, bonsai osisi, pink na-acha ọcha okooko lili. J na A si na-akpọ kaadị bụ ala uru akara. The top na-akwụ ụgwọ ihe nnọchianya nke a free spins na-ihe ị na-emeri saịtị game bụ frog na-akwụ 900 mkpụrụ ego na ise nke ọdịdị ya. E nwere ihe isii dị iche iche bonus akara na egwuregwu a na nke ahụ bụ ihe na-eme egwuregwu a nnọọ pụrụ iche. N'oge free spins, ị ga-enweta nanị anọ nke ndị a na akara.
Wild Symbols: Dragọn ahụ na ndị gold mkpụrụ ego bụ isi ọhịa akara na ha na-enye gị eto mmeri. Na ise dragons na a payline, ị nwekwara ike imeri 2000 ugboro your eto. Dragon nọ n'ọnọdụ niile isi na akara. The na mkpụrụ ego adịghị n'oge spins ma dara site na ọlaedo osisi n'elu. Ọ bụla ọnụ ọgụgụ nke ego nwere ike ịda na ha ịnọchi anya niile isi akara oke.
Gbasaanụ Njirimara: The Yin yangs bụ ma anụ nakwa dị ka ikposa ihe nnọchianya nke a free spins na-ihe ị na-emeri saịtị game. Ndị a na-egosi online na-esi anwụde abụọ anọ na atọ n'ime ha triggers 10 free spins.
Summary: Nke a bụ free spins na-ihe ị na-emeri saịtị egwuregwu na ọnụ ọgụgụ kasị elu nke bonus atụmatụ. Ha na-enyere ị na-eme nnọọ Ugboro Enwee Mmeri si dị iche iche ihe n'ịgwa.